Ngingayigcwalisa kuphi i-Soriana Móvil? Shaja kabusha iselula ye-Soriana kalula futhi ngokushesha, manje unezitolo ezingaphezu kwezinkulungwane ezingama-50 namanani afinyelelekayo, asukela ku- $ 10 kuya ku- $ 500. Nomaphi lapho uya khona ungahlala uxhumekile nensizakalo oyinikezwa yi-Soriana mobile.
Ungakwazi ukushaja kabusha iselula yakho usebenzisa isitolo ozikhethele sona, ngohlelo lokusebenza lweselula, ngamaphoyinti emivuzo, izitolo zangaphandle noma ngocingo. Lapha sizokukhombisa ukuthi ungayiphatha kanjani inkokhelo ngezindlela ezahlukene ezitholakalayo.
Iselula ye-Soriana isebenza ngaphansi kwemodi ekhokhelwa kuqala, ngamanani nezinhlelo ezizokongela imali futhi zilawule okusebenzisayo. Uma ugcina ibhalansi ephozithivu, ungajabulela imizuzu yamahhala, imilayezo yombhalo nama-megabytes ukuze uphequlule.
Ngekhasi web yeselula ye-Soriana ungakwazi ukwandisa ulwazi ukuze wenze ukushajwa kwakho kabusha ngempumelelo. Finyelela kusuka kukhompyutha yakho noma i-smartphone, bhalisa bese ufaka inombolo yakho yeselula ye-Soriana kanye nephasiwedi oyisungule ngaphambilini. Manje usungashaja kabusha ku-inthanethi nangesikhathi osifunayo.
Shaja kabusha iselula ye-Soriana ezitolo
Le sevisi yocingo entsha ifuna ukwandisa izinzuzo kuwo wonke amakhasimende ayo. Ungenza i-Soriana yakho yeselula ishaje kabusha ezitolo ezihlukene ezweni lonke nanoma yikuphi emhlabeni. Kunamazwe ayi-117 anokusebenza kwawo okuhle kakhulu.
Isu layo lezentengiso liqondiswe ezitolo ezingama-827. Ingena lapha futhi uthole isitolo esiseduze nekhaya lakho, hamba kuleso esikufanele kakhulu futhi ushaje kabusha ngokushesha futhi kalula.
Shaja kabusha iselula ye-Soriana ezitolo zangaphandle
Ngaphezu kwezitolo, i-Soriana Móvil isebenza kumaketanga ezitolo ezinkulu nezindawo zokugcina izimpahla ezaziwayo ezweni lonke. Amakhemisi okonga ngesinye sezitolo ezitholakalayo ukwenza ukushajwa kabusha kweselula yakho i-Soriana.
Yiya kunoma yimaphi amabhokisi abo futhi ucele insiza yokushajwa abayihlinzeka lapho, cela ukushajwa kabusha njenge-Yobi futhi ngesikhathi esifushane uzoba nemali etholakala kuselula yakho.
Shaja kabusha iselula ye-Soriana ngohlelo lokusebenza
Landa uhlelo lokusebenza lweselula lwe-Soriana ocingweni lwakho bese ulufaka kabusha ngokuphepha. Lolu hlelo lokusebenza luyatholakala ku I-Google Play ye-Android nokuvula App Store kumadivayisi we-iOS. Ngemva kokulanda uhlelo, landela imiyalelo ngokuningiliziwe.
Ukushajwa kabusha kwe-Soriana Móvil kungenziwa ngamaphoyinti e-Soriana noma kusetshenziswa amakhadi akho esikweletu asebhange. Ngalolu hlelo lokusebenza, ungathola nezingosi zokushaja eziseduze nawe.
Shaja kabusha iselula ye-Soriana ngamaphuzu wemivuzo
I-Soriana Rewards Programme ikuvumela ukuthi uqongelele amaphuzu, ngokuthenga kwakho kuzo zonke izitolo ze-Soriana. Kuwo wonke ama-$8.00 okuthengayo, uzothola iphuzu elingu-1 ekhadini lakho, futhi ungalithola ngokuthenga imikhiqizo yokuphromotha.
Yonga imali futhi ujabulele izinzuzo eziningi. Ngalolu hlelo uzokwazi ukushaja kabusha ibhalansi kulayini wakho weselula we-Soriana. Amaphuzu akho anika kabili ekushajweni ngakunye ngakunye. Isibonelo, uma ufaka u-$10 namaphuzu akho, uzothola u-$20 kulayini wakho.
Thatha ithuba lamaphromoshini abakunikeza wona. NgoLwesithathu konke okuthengayo kukunika amamegabhayithi, ngomkhiqizo ngamunye uzothola iMegabhayithi engu-1 ukuze uzulazule. Uma uthenga imikhiqizo emi-5, uzoba namamegabhayithi engeziwe.
Ungabhalisa ikhadi lakho "Imiklomelo" kuphrofayela yakho yomsebenzisi yesitolo se-inthanethi se-Soriana.com noma i-SorianaDomicilio.com futhi uyethule emabhokisini egatsha olithandayo. Ungakwazi futhi ukubhalisa kusuka kuhlelo lokusebenza lweselula.
Shaja kabusha iselula ye-Soriana ngocingo
Ngokushaya umakhalekhukhwini wakho, ungashaja kabusha ngaphandle kwesidingo se-inthanethi futhi kusukela ekunethezekeni kwekhaya lakho. Sebenzisa inketho 2 yemenyu yesevisi (* 5050), ushayele # 369 # usuka ku-Soriana yakho yeselula, usebenzisa ikhadi lakho lemiklomelo.
Phezulu kuselula » Okwelinye izwe » Shaja kabusha iselula ye-Soriana